မွတ်စလင်သတင်း | Myanmar Muslims' Voice (MMV)
Category Archives: မွတ်စလင်သတင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မူဆလင်များအပေါ် ဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဥရောပ ပါလီမန် ရှုတ်ချ July 8, 2016 မွတ်စလင်သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း မြန်မာနိုင်ငံက မူဆလင် လူနည်းစုတွေ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိတာ၊ Bahrain နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ အခြေခံ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်နေတာနဲ့ Malawi နိုင်ငံက Albino လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားဖြူ ရောဂါရှင်တွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွါးနေတာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရှုံ့ချကြောင်း အဆိုပြုချက် (၃) ခုကို ကြာသပတေးနေ့မှာ ဥရောပ ပါလီမန် (European Parliament) မှာ မဲပေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ (၂၀၁၅) နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကနေ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ NLD ပါတီ တခဲနက် အနိုင်ရခဲ့ပြီး (၁၉၆၂) ခုနှစ်က စလို့ စစ်တပ်က မဟုတ်တဲ့ သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ်
Read More Myanmar must address ‘serious’ human rights violations against minorities – UN rights chief June 21, 2016 ENGLISH, မွတ်စလင်သတင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Issuinganew report on the situation of minorities in Myanmar, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra’ad Al Hussein has urged the Government to take concrete steps to end the “systemic discrimination” and ongoing human rights violations against minority communities, particularly the Rohingya Muslims in Rakhine state. The report
Read More DVB – လှိုင်းဘွဲ့ ရွှေဂွန်းရွာတွင် ဗလီဘေးနား စေတီတည် April 26, 2016 Featured Posts, မွတ်စလင်သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း DVB မြန်မာပိုင်း သတင်းအား တဆင့်ပြန်လည် ဖော်ပြသည်။ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာရှိ ဗလီနဲ့ ကပ်လျက်နေရာမှာ မနေ့ညနေက စေတီတဆူကို နာရီပိုင်းအတွင်း အပြီးအစီး တည်ခဲ့တယ်လို့ ရွှေဂွန်းကျေးရွာသားတွေက ပြောပြပါတယ်။ ဒီစေတီတည်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက မြိုင်ကြီးငူဆရာတော်ဦးစီးပြီး လှိုင်းဘွဲ့မြို့ ကွမ်းတောကျေးရွာက ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း စေတီတည်ခဲ့အပြီး တပတ်အတွင်း ဗလီနဘေးမှာ ထပ်မံစေတီတည်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗလီနဘေးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လက ဘုရားမြှုပ်ပြီး ခုမှ အမြန်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက် စေတီတည်သူတွေက ဗလီနဘေးက စေတီတည်ပြီးနောက် ကားဝင်းကြီးနဲ့ ကျောက်စက်နေရာ တွေမှာ စေတီထပ်တည်ဖို့ ဘုရားရုပ်တုတွေမြှုပ်သွားကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အ.ထ.က ၁ကျောင်းရှေ့ လမ်းဂွကြက်လျှာစွန်းမှာ နှစ်ဆူနှစ်နေရာ၊ ရွှေဂွန်း အဝင် စစ်တပ်စခန်း
Read More Istanbul hosts the 13th Islamic Summit Conference on 10-15 April April 7, 2016 ENGLISH, မွတ်စလင်သတင်း The General Secretariat of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) has completed its preparations for the 13th Islamic Summit Conference (OIC) to be hosted by the Republic of Turkey in the city of Istanbul on 10-15 April 2016. The leaders of the Islamic world are expected to make decisions and take practical measures
Read More Senior UN relief official calls for end to discrimination against displaced Muslims in Myanmar March 22, 2016 ENGLISH, မွတ်စလင်သတင်း, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော် Many of the Muslims displaced by inter-communal violence in Myanmar are still prevented from moving freely and often denied access to local hospitals,asenior United Nations humanitarian official said today, calling for an end to such discriminatory practices. More than 100,000 people remain displaced by the ongoing conflict in Kachin and northern
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ဆန်းသစ်လာသော မြန်မာမြို့ပြမြင်ကွင်းများ
Myanmar Government itself is behind mass violence against the Muslims & the Rohingya
ဦးဇာဂနာ – “အမေရိကန်အစိုးရနှင့် ပြည်ပမီဒီယာများ၏ ရခိုင်အရေး သုံးသပ်ချက် ရာနှုန်းပြည့်မမှန်”
ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း – (၁၉၄၇) ခုနှစ်က ရွှေမြို့တော် မက္ကာဟ်ရှိ အထွဋ်မြတ်ဆုံး ကအ်ဘာကျောင်းတော်ကြီး၏ မြင်ကွင်းများ
ဗြိတိန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးရာ သုံးသပ်ချက်စာတမ်း – အပိုင်း (၃)
Microsoft Office 2010 ဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာတမ်းများ
Islamic News DailyIts Confirmed! it was SriRamsena Men who threw Gobar on ShriRam Banner in ShahabadThis robot can 3D printabuilding in 14 hoursWorld Press Freedom Day: India slips to 136, The Hoot highlights ‘sense of shrinking liberty’ in IndiaIndian Government Needs To Stop Targetting NGOs That Criticise It, Human Rights Watch Tells United NationsApple’s cash reserves swell to $250bn, greater than the combined foreign reserves of the British government and Bank of England IslamSally Yates Tells Harvard Students Why She Defied TrumpNew Jersey Town Used Zoning to Discriminate Against IslamDonald Trump Discovers MuslimsPresident Trump’s Mideast ContradictionsTrump’s Message in Saudi Arabia © 2017 Myanmar Muslims' Voice (MMV). All Rights Reserved. The MMV is not responsible for the contents of external sites. Powered by WordPress | Designed by: Airport parking at Bristol | Thanks to Theatres in Manchester, Sell old mobile and Unlimited broadband deals